Rosia · Jolay, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Rosia · Jolay, 2017
Tantara mikasika ny Rosia tamin'ny Jolay, 2017
Foko sy Fiaviana 27 Jolay 2017
Fahalalahàna miteny 25 Jolay 2017
Azia Afovoany sy Kaokazy 23 Jolay 2017
Fahalalahàna miteny 22 Jolay 2017
Fanatanjahantena 21 Jolay 2017
Belarosia 20 Jolay 2017
Mediam-bahoaka 17 Jolay 2017
Ao Moskoa, azo vidiana any amin'ny mpamily 25 robla izay mitovitovy amin'ny 1$ ny tapakila ho an'ny fiara fitateram-bahoaka/trolleybus/tram . Mahazo fihenam-bidy ianao raha toa ka mividy ny tapakilanao eny amin'ny fivarotana manokana. Kanefa aleon'ny olona sasany manao hosoka sy mitaingina maimaim-poana. Fantatra amin'ny anarana hoe zayats amin'ny Rosiana: izany hoe bitro dia ny mpandeha tsy manana tapakila . Nitantara (RUS) ny zavatra hitany vao haingana raha nifanena tamin'io karazan'olona io ilay mpisera LJ kozenko monina ao Moskoa :
Ady & Fifandirana 16 Jolay 2017